China Obere nkenke spraying Machine maka Scientific Research site Ultrasonic raygba Atomization Equipment rụpụta na Factory | Qianrong
Obere nkenke spraying Machine maka Scientific Research site Ultrasonic raygba Atomization Equipment
Ultrasonic ịgba atomization akụrụngwa bụ obere nkenke spraying igwe kwesịrị ekwesị maka nyocha sayensị. Ọ na - agbaso QRsonic ultrasonic spraying technology maka akwa edo nke sub-micron na nano-larịị mkpa ịse mkpuchi. A na-eji ya eme ihe na mkpụrụ ndụ mmanụ, mkpụrụ ndụ anyanwụ, na mkpuchi ihe. , Kọmputa eletrik na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Hangzhou Qianrong Automation Equipment Co., Ltd. bụ ọkachamara emeputa nke onwe ha nnyocha na mmepe, mmepụta na ahịa nke elu-ike ultrasonic isi mmiri na zuru ezu tent nke ngwa ngwa, na-elekwasị anya na-abụghị etozu ike ultrasonic ngwa. Isi ngwa ndị metụtara bụ: ultrasonic atomization spraying, ultrasonic indium mkpuchi / tinning / dip ịgbado ọkụ, ultrasonic ọnwụ, ultrasonic elu-okpomọkụ ngwọta ọgwụgwọ, ultrasonic dispersion / ndinuak / emulsification / homogenization, ultrasonic plastic / metal ịgbado ọkụ, ultrasonic ntụpọ ịgbado ọkụ / Rolling ịgbado ọkụ / enweghị ntụpọ kpachie, nkwusioru ultrasonic, wdg.
Ultrasonic atomization spraying spraying: jiri ume nke ebili mmiri ultrasonic iji gbarie mmiri ma ọ bụ mmiri mmiri iji mepụta obere ihe nke ọtụtụ microns karịa 100 microns na nha iji nweta ikuku ikuku, mmiri mmiri mmiri, ịgwakọta, nkwalite nke mmeghachi omume ọgwụ, spraying, na metal agbaze Sistemụ Fans na nzube ndị ọzọ.
Akwa dị n'otu: Ultrasonic spraying bụ nnukwu arụmọrụ nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma, na-eji teknụzụ dị elu, nke ejiri ihe dị elu nke obere-micron na akwa nano.
Ihe nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi: Ebe ọ bụ na ịgba ọsọ ọsọ na-enweghị nrụgide dị mfe ịchịkwa, ụmụ irighiri mmiri na-adakwa na mkpụrụ osisi ahụ kama ịghaghachi site na mkpụrụ ahụ, ọ nwere ike hụ na mbelata dị ukwuu na oke ego, chekwaa ọtụtụ ihe ma belata anwuru gburugburu ebe obibi. Na mkpuchi itinye n'ọrụ ọnụego nke ultrasonic spraying bụ karịa 4 ugboro nke nke omenala abụọ-mmiri spraying.
Nchịkwa dị elu: Mgbe achọrọ ka ọ dị ala dị ala, oghere ahụ bụ ihe kachasị achọ. Mgbe a na-akwụsịtụ ihe ndị na-agba agba, ha nwere uru ndị pụrụ iche. Site na mmetụta ultrasonic nke oghere ahụ n'onwe ya, a na-echekwa ahụ ahụ n'ụzọ zuru ezu n'oge usoro ịgba spraying niile iji hụ na arụ ọrụ ndị ahụ na-agbasasịkwa na oyi akwa.
Nnukwu arụmọrụ na ike nchekwa: a na-ebufe mmiri mmiri na isi isi ya site na ike ndọda ya ma ọ bụ mgbapụta dị ala ma na-aga n'ihu ma ọ bụ na-aga n'ihu na atomization, enweghị mgbochi, enweghị akwa, enweghị mkpọtụ, enweghị nrụgide, ọ nweghị akụkụ ọ bụla, enweghị mmiri jụrụ n'oge atomization, na ike oriri dị ala, Akụrụngwa dị mfe, ọnụọgụ ọdịda dị ala, ihe ntanye ultrasonic nwere ọrụ nhicha onwe ya, na mmezi kwa ụbọchị bụ n'efu.
A na-ejikarị ya mee ihe: A na-ejikarị ihe ndị na-agbazi Ultrasonic eme ihe na mkpụrụ ndụ mmanụ, mkpụrụ ndụ foto foto dị mkpa, ihe mkpuchi ihe nkiri dị na mbara igwe, perovskite sel ndị dị na mbara igwe, mkpụrụ ndụ nke anyanwụ, mkpuchi graphene, mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ silicon, mkpuchi iko, kọntaktị eletriki na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. A na-etinye ihe mkpuchi ahụ n'ọtụtụ ngwọta, nsị mmiri, mmiri mmiri mmiri, na mmanụ mmiri.
Nke gara aga: 3000W Ihe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke Plastic End Caps maka Nkpakọba Nhazi Ntinye Ntinye
Osote: Ultrasonic Metal Powder Atomization Technology nke Tin Powder Site High Frequency Ultra
30Khz 700w Ultrasonic Vibratior maka Ultrasonic ...
High Frequency 40Khz ọma jijiji Ultrasonic Rubbe ...
RFID Smart Kaadị 60Khz High Frequency Ultrasonic ...
38mm dayameta 28Khz Ultrasonic ọma jijiji Transd ...
40Khz Portable Light Ultrasonic tingcha Ngwaọrụ ...
20Khz Ultrasonic Plastic ịgbado ọkụ Machine maka Nke ...